Iifilimu ezingama-50 ezilungileyo kakhulu ezimbi - Inkcubeko Yepop
Iveki yonke, Umkhombe Siza kube sibhiyozela iiMuvi ezimbi ezimbi, ezo bhanyabhanya zoyikekayo ziyahlekisa ngokungapheliyo kwaye-sitsho? -Lungile. Nceda usijoyine njengoko sinika imiboniso bhanyabhanya engaphezulu-phezulu, imincili yothando oludla imali ephantsi, kunye nencopho yama-80s yamasi-fisisti amabala ombala awafaneleyo.
rap endala emhlophe rap
Nantsi into andoyiki ukuyivuma: ndiyibonile Indlu yendlela amaxesha angaphezulu koku ndibone Utatomkhulu . Ndibonile Ummi Kane kabini ebomini bam - kodwa wabukela kanye Nguye Konke Oko kabini ngeveki. Nawe unetyala lento enje.
Kukho nje into eyonwabisayo malunga nomdlalo bhanyabhanya ongenathemba uzinikele kumbono wakhe (ombi kakhulu). Nokuba kungenxa yeziphumo ezizodwa ezimbi, isenzo esibi, okanye iqhinga elingenangqondo ngokupheleleyo okanye elingenantsingiselo, ezi bhanyabhanya zenza ukuba umangaliswe kwaye zikunyanzele ukuba uthi, 'injani le movie ?!' Kodwa inyani yokuba into engekho ngqiqweni, okanye uhlahlo-lwabiwo mali olusezantsi, okanye ukukhulelwa okungalunganga ikhona yingcambu yesizathu sokuba sizithande ezi bhanyabhanya. Zizo ke kubi ukuba… zilungile zilungile.
Kuba lixesha lasehlotyeni- ixesha apho uninzi lweeMovie eziMbi eziLungileyo ziqhakazile- besifuna ukunika ingqwalaselo eyifaneleyo. Siza kuphonononga uhlobo olo ngokude, kodwa akukho projekthi iya kugqitywa ngaphandle koluhlu olukhulu olumisela ngokuqinisekileyo iiMovie eziMbi eziLungileyo eziza kukhutshwa. Kwakungumsebenzi weHerculean (kwaye kule meko sisebenzisa ngokukodwa isichazi kunye neLiwa IHercules engqondweni); nantsi indlela esiyenze ngayo.
Uhlobo olubi lweMovie alululanga ukuyichaza. Umgca phakathi kokubi-ulungile kwaye ungalunganga-ngasekhohlo-kwindawo yemidlalo yeqonga ubhityile; Ukunambitheka kukuzithoba, kwaye oko umntu omnye akufumanisa kukubi ngokuhlekisayo abanye banokukujonga njengokubi. Ukuvela kweemovie bhanyabhanya, Okwangoku, kuphakamisa imibuzo malunga nokuba iinjongo zobugcisa zibaluleke kangakanani ekunikeni ifilimu ileyibheli elungileyo engalunganga. Ke ngoko, ukulandela le mithetho mithathu yindlela eqinileyo, efanelekileyo yokufumanisa ukuba imovie ilungile:
Ukonwabela imovie kufuneka kuthathwe kububi bayo. Ububi bayo kufuneka bube yinto edala ukonwaba.
Kuya kubakho umbono ogqubayo wokuba abo benza ifilimu bacinga ukuba into abayenzayo ilungile, okanye ilungile. Iifilimu ezilungileyo ezingalunganga zinokuzazi okuncinci. Nayi imizekelo emibini enokunceda ukucacisa le mvakalelo: (1) IMacGruber ayisiMuvi imbi yoMbi bhanyabhanya, yimbeko kwiiMovie ezilungileyo ezibi, kunye (2) Ukukhawuleza ezintlanu ayisiMovie imbi yeBhayisikobho, ngumdlalo bhanyabhanya oqhubeka usenza into ehlekisayo (emva koko uvelise impendulo efana naleyo Imiboniso bhanyabhanya engalunganga iphakamisa ngokwendalo).
Umboniso bhanyabhanya kufuneka ukuba uyinto ethile yokusilela okubalulekileyo xa wakhutshwa. Abagxeki, uthixo abasikelele, bamba iimovie kumgangatho ophezulu njengefom yobugcisa kwaye ngokubanzi awubuyiseli mboniso bhanyabhanya ngokuba ngumgangatho ophantsi. Ngale ndlela, ziluncedo, njengeenjongo ezinokubakho ekumiseleni ukuba zeziphi iifilimu ezingalunganga, kwaye ke kufanelekile ukuba zilunge.
Emva kokuqinisa into efanelekayo kwiMovie elungileyo engalunganga, siye saya ekwakheni uluhlu olungaphezulu kwama-50.
Iqale ngaphakathi endlwini, inabasebenzi be Umkhombe Ukutyumba abagqatswa. Emva kokuhluthwa kwabatyunjiweyo abangawuthobelanga umthetho onguNombolo 3 apha ngasentla- nayiphi na ifilimu enenqanaba elingaphezulu kweepesenti ezingama-60 kwiTamati ebolileyo yathathwa njengengafanelekanga- iimuvi ezishiyekileyo zafakwa ngale ndlela:
Ndiyazi. Hlala nam.
I-CR imele ukuBaluleka kweNkcubeko, kwaye yagqitywa ngokuphindaphinda inani lemovie yeendaba zeGoogle kunyaka ophelileyo (inqaku eli-1 linikezelwa nge-100 hits) ngenani leminyaka kususela oko kwakhutshwa loo movie. Ubuchule beMovie engeyiyo ukuhlala kwisincoko senkcubeko iminyaka emva kokuba iphumile kubalulekile, kwaye kubonisa indlela imovie efanelekileyo ekufumana ngayo uxabiso kunye nokukhula kwesiseko sabalandeli.
I-RT-le ilula- imele amanqaku eRamate ebolileyo. Ngenxa yokuba iiMuvi ezilungileyo ezingalunganga kufuneka zoyise umgangatho okumgangatho ophantsi ngokumangalisayo, inkqubo yethu iyayithanda imiboniso bhanyabhanya enokwamkelwa okunzulu ngokunyanisekileyo, endaweni yezo ziphononongwe njengeziphakathi kokubi.
I-PO imele uluvo lukaRhulumente. Ukonwaba ngokubanzi sisiphelo esipheleleyo seMovie elungileyo engalunganga, kwaye ingaba imo bhanyabhanya engathandekiyo ethandwayo sisiseko sokulinganiswa kwayo nezinye iiMovie eziMbi eziLungileyo. Ukuchonga i-PO, kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo sithumele ngaphandle Uluhlu lwabo bonke abagqatswa kwaye bacele abafundi ukuba bakhethe ii-10 zabo abazithandayo. Emva kokuba ivoti ivaliwe kwaye iivoti zizonke zibekiwe, imovie nganye yabekwa kwindawo yokuqala ukuya kwi-64, indawo yokuqala yanikwa amanqaku angama-64, indawo yesibini amanqaku angama-63, njalo njalo. Ngaba abantu abangama-6 700 okanye abo bavote kule poll ngokufanelekileyo babonisa uluvo loluntu olujongayo? Mhlawumbi akunjalo. Kodwa ade urhulumente ongeze imibuzo embi ye-Movie kwiifom zobalo bantu, le yeyona nto intle siyifumeneyo.
I-GBS imele amanqaku amahle. Ukuphakama kwe-movie ye-GBS yile, kokukhona ihlonitshwa njengeMovie elungileyo engalunganga.
Konke kulungile! Ngoku ukuba iklasi yezibalo iphelile, lixesha lokuba ufunde ii-movie ezingama-50 ezilungileyo kakhulu ezimbi. -Andrew Gruttadaro
50. 'Izandla Ezingasebenziyo' (1999)
Amanqaku amabi: 43.2
Utamatisi obolileyo: 16%
UAndrew Gruttadaro : Nantsi indlela endiyifanisa ngayo indlela yokuhlangana kwebala Izandla eziMdaka waya:
Guy 1: Heyi, ya uyazi laa nto ithi, 'Izandla zokungasebenzi ziworkshop zikamtyholi'?
Umfana 2: Kinda.
Umfana 1: Kuthekani ukuba yayiyimovie?
Guy 2: Nantsi i $ 25 yezigidi.
Izandla eziMdaka Imeko malunga nokuxuluba ngamatye onesandla sakhe esenza ingqondo eyeyakhe kwaye aqhubeke nokubulala. Sisidenge esingakholwayo nesithethi esingaqhelekanga: Isandla salo mfo sibulala abazali bakhe kunye nabahlobo abasenyongweni, kwaye konke kudlala ngathi kukuhlekisa. Kodwa Izandla eziMdaka ilungile ngokubi ngenxa yendlela ebukhali ngayo ixesha - ngo-1999 kwi-VHS tape. Yonke imovie ifunyenwe nguMntwana oNzala- yeyiphi erhuqwayo iphuma kwindlela yayo ukukhankanya; I-90 yeminyaka yentliziyo uDevon Sawa uyakhokela; USeth Green, elo xesha lihamba ngobukrelekrele ngobukrelekrele, lichule lobuqili; kwaye u-pre-Honest uJessica Alba uyintombazana eyiyo engummelwane ngubani… ungene imeko yesandla? Andazi ukuba njani kwaye / okanye ngoba - kodwa ndiyayazi lonto Izandla eziMdaka Yigugu lemovie embi.
49. 'ILionheart' (1990)
Shea serrano : Ifomula yamacandelo asixhenxe yokwenza iMuvi elungileyo engalunganga: Okokuqala, waphosa uJean-Claude Van Damme. Okwesibini, wenza i-movie ibe yinto apho eyona nto iphambili kwisakhiwo kukuba kufuneka alwe kwitumente okanye kwiincwadi ezingalwisaniyo nesangqa ukuphindezela into okanye umntu othile. Okwesithathu, uyaqiniseka ukuba awunako-ukoyisa umntu ombi olinde i-JCVD ekugqibeleni. Okwesine, ungalibali ukufafaza, yithi, into efana neepesenti ezili-10 ezixabisekileyo xa i-JCVD inxibelelana nomntu obhinqileyo ngendlela enomtsalane. Okwesihlanu, qiniseka ukuba unendawo apho apho enzakalayo kakubi kodwa hayi kakubi kangangokuba imyekise ngokupheleleyo ukulwa. Okwesithandathu, ubuncinci bonisa indawo enye ehlekisayo. Kwaye emva koko sixhenxe, mayiphele nge-JCVD yonke ikhutshiwe kodwa yoyisa. Isebenza malunga nexesha ngalinye. (Ngaphandle kwe Ukufuna . Andazi ukuba kwenzeka ntoni i-TF apho.)
48. 'Iselula' (2004)
RT: Iipesenti ezingama-55
UMikha Peters : Kukho izinto ezininzi ezibala ngokuchasene ne-2004 thriller Iselula : UJason Statham kwindima yomntu okhohlakeleyo, ehlala evakalelwa kukuba; ukhetho olungekho ngqiqweni kwaphela; inyani yokuba ayisiyiyo kwaphela Ifowuni yeBhooth 2 . Kodwa emva koko, ingaphaya kwemizuzu engama-90 kwaye kuyonwabisa okanye ungaqondanga ngokungacwangciswanga ngokwaneleyo ('Uzibandakanye njani?' 'Ndiphendule nje umnxeba wam' lutshintshiselwano) ukubamba ingqalelo yakho de iikhredithi ziqengqeleke. Awuyi kucinga nzima kakhulu, mhlawumbi enye okanye ezimbini iinkcukacha ziya kuhlala kunye nawe - njengoStatham noChris Evans bexhamla i-tee crewneck tee eyona nto iphakathi, okanye indlela i-movie evakalelwa ngayo njengokuba yenziwe ngokukodwa kwinkqubo ye-MTV2 yosuku-kwaye zombini UWilliam H. Macy noJessica Biel bakulo.
47. 'Incopho yedante' (1997)
UAlyssa Bereznak : UPierce Brosnan ujongeka epholile ngokwenene entabeni nakufuphi kuqhushumbo. Logama nje uyakwamkela oko njengokuphela kwesiseko sokudibanisa isenzo esingathandekiyo ngo-1997 Incopho yeDante , uya kuba nakho ukonwabela. Ifilimu yenzeka kwidolophu enoxolo ethi ibethwe emva kokuba kuqhume intaba-mlilo ebingasasebenzi kanye ngequbuliso. U-Brosnan udlala i-vulcanologist eyaziwayo echitha isiqingatha sokuqala se-movie ekhwela ematyeni kwaye elumkisa abantu ukuba ingozi iza. Wonzakele kukusweleka kwentombi yakhe, 'eyayithanda iintaba-mlilo' kodwa yabulawa yenye. Kwaye nangona eqinisekisa usodolophu wedolophu / umama ongatshatanga uLinda Hamilton ukuba athandane naye kwisithuba sosuku, uqinisekisa ukuba 'ebesoloko ebhetele ekuchazeni iintaba-mlilo kunabantu nezopolitiko.' $ 100 yezigidi Ixabiso le-lava etyhidiweyo ye-CGI kamva, uphuma entabeni yesihogo ngengalo eyaphukileyo kunye nosapho olutsha. Ukuba yingcali ye-vulcanologist luhambo, ndoda.
46. ​​'Kugqityiwe' (2009)
UHana Giorgis : Zingaphi izihlandlo onokuthi ubukele i-pre-Blue Ivy Beyoncé isithi 'Uchukumisile umntwana wam' kulomfazi umhlophe (Ali Larter) ezama ukuba umyeni wakhe (Idris Elba)? Umda awukho. Intoni Ukuqwalaselwa isilela kwincoko ethembekileyo, isiseko, kunye nomgangatho ngokubanzi, iyenzela uBeyonce-Ali Larter imilo yokulwa kunye nembono kaBeyoncé no-Idris Elba njengesibini. Uxolo, Ayilibaleki .
45. 'Ilitye elibandayo' (1991)
Nkomo: Kukho iindlela ezininzi zokufumanisa ukuba imovie yimovie imbi nje okanye ukuba yiMovie elungileyo engeyiyo, kodwa mhlawumbi eyona ilula kukuzibuza, 'Ngaba le nkwenkwezi yemiboniso bhanyabhanya uBrian Bosworth njengepolisa elikhohlisayo ekufuneka uye emfihlakalweni ukuze uthabathe iqela labamhlophe labakhweli beebhayisikile? Kwaye ngaba ukhona umboniso apho umntu othile atyhafiswa sisandla ngenxa yokuba omnye umntu esisifaka kwivili lokuhamba ngesithuthuthu? Kwaye isimilo sikaBrian Bosworth sinekomodo dragon eyondla i-smoothies ezenziwe ngeSnickers kunye neetshipsi zeetapile? Kwaye ngaba ikhona indawo apho umntu onxiba ngathi lilungu labefundisi ukuze akhusele iqela lezixhobo kwinkundla yamatyala? ' Kuba ukuba iimpendulo zale mibuzo ngu-ewe, uyazi ukuba yiMovie elungileyo engalunganga.
44. 'Indoda eyiWicker' (2006)
RT: Shumi elinantlanu%
ULindsay zoladz : Umboniso bhanyabhanya ulungile kuphela ngokungalunganga njengomdlalo wawo wokusela ohambelana nawo. Ndingatsho ngokuzithemba, emva koko, ukuba ukubuyiswa kwakhona kukaNic Cage ka-2006 Indoda e-Wicker yiMovie embi kakhulu, kuba ukusela umdlalo nabahlobo bam kwaye sadlala kanye ngelixa sasibukele kwasenza sanobundlongondlongo kangangokuba ndaphantse ndagxothwa ekhaya. Imithetho ibandakanya 'ukusela ngalo lonke ixesha uNic Cage ephakamisa ilizwi,' 'usele ngalo lonke ixesha uNic Cage esenza ibango elingenangqondo,' kwaye, nesibindi esingasokuze siphinde sibuye, 'sela ngalo lonke ixesha uNic Cage ehlasela nantoni na ngenjongo yokonakalisa ( Oku kubandakanya nabantu). '
Elona xesha lihlekisayo Indoda e-Wicker unayo, ngokufanelekileyo, ube memes: Ukufundwa kwe-Cage ngokweqile komgca 'Utshiswa njani?' ; ukufa kwakhe kwenza isijwili 'HAYI IINYOSI!'; kwaye, ewe, indawo apho abetha khona umntu wasetyhini ebusweni ngelixa enxibe isuti yebhere, eyiyo kuphela kancinci ehlekisa ngakumbi xa ufakwa kukuhamba kancinci kwaye usete kwi Iinqwelo zomlilo ingoma . Ukusuka phezulu kuye ezantsi, le bhanyabhanya ngokusisiseko iyure kunye nemizuzu engama-42 kaNicolas Cage ebetha umbukeli ngenjongo yokonakalisa, oko kuthetha ukuba kuya kufuneka usele yonke loo nto.
43. 'Igazi elincinci' (1986)
Gruttadaro: Igazi elincinci Kuza kwenzeka ntoni xa uphosa Ukudanisa mdaka , Elmo's Umlilo , kunye nepaki yehockey kwi-cauldron. Kuyinto emnandi 'yee-80s, enexabiso elingenangqondo le-hockey ezihamba kancinci, a kumnandi uqeqesho lwemontage , imbaleki etshisa kakhulu kodwa emnandi 'idibanisa iintombi zomqeqeshi, kunye nomqolo weempawu zeminyaka elishumi: URob Lowe, uPatrick Swayze, kunye noKeanu Reeves omtsha. Kuzo zonke izinto ezingenayo kwi-80s oeuvre kaSwayze, Igazi elincinci mhlawumbi ufumana imbeko encinci, kodwa iyifanele ngokupheleleyo intshukumo yehlelo. Ndiyathetha, c'mon, jonga nje oku:
42. 'IHercules' (2014)
USam Schube : Into yokuqala ekufuneka sithethe ngayo ngumnqwazi wengonyama kaHercules. IHercules inezinto ezininzi ezintle, ezoyikisayo, ezimbi kakhulu - isonka samasi uBrett Ratner's gory ulwalathiso, ukujika kwesithende sikaJohn Hurt, inyani yokuba iRock's Hercules ineenwele ezinde zamahlombe kunye neklabhu emenza abukeke njengoBam-Bam - kodwa Kufuneka siqale ngomnqwazi wengonyama. Umnqwazi wengonyama:
Umnqwazi wakhe wabayintloko yeNgonyama yaseNemean, leyo uHercules wayibulala njengenye yemisebenzi yakhe edumileyo eyi-12. Ngokwendalo, ifilimu kaRatner yada-yadas abo bazama ukwenza imovie malunga noqeqesho lukaHerc umkhosi wamafama. Kodwa leyo yinxalenye yesibheno sefilimu. IHercules ucinga ukuba akukho mntu uya kuze abone imovie kaHercules e… uyazi, malunga nelivo likaHercules. ('Uyise wakhe nguZeus - uZeus, ukumkani woothixo,' umbalisi weli bali. Ndiyifumene- nguZeus.) Endaweni yayo, sifumana inkemba eyomeleleyo yamakrele neembadada, intsebenzo edidekileyo kaDwayne Johnson, kunye - ewe - umnqwazi wengonyama. Ingade ibhonge.
41. 'Uyakhonza' (2004)
Giorgis: U-2004 yayilixesha elilula. Ixesha apho iimovie zomdaniso zazilawula kakhulu, xa i-B2K yalawula umoya kunye neentliziyo zamantombazana akwishumi elivisayo. Ixesha elisizisele into eyiyo Usebenze , bhanyabhanya wokhuphiswano lomdaniso oyoyikisayo olwenza iinkwenkwezi u-Omarion (kunye nayo yonke i-B2K, kwithiyori), uMarques Houston, Meagan Good, noSteve Harvey. Bukela ubuchwephesha obunyanzela ngakumbi kunabalinganiswa ngokwabo, idrama eqikelelwayo engenakulinganiswa, kunye nomxholo wegama eliyimbonakalo.
40. 'Ukulwa' (2012)
UAmanda Dobbins : URihanna
Kunye noJerry Ferrara
& Inqanawa yeMfazwe yesibini (II) yeHlabathi ehlaselwa ngabaphambukeli
UThixo asikelele wonke umntu - ngokoqobo wonke umntu ongatshatanga - othathe le bhodi yomdlalo webhodi ngokuzimisela.
39. 'Gcina uMdaniso wokugqibela' (2001)
Giorgis: Emva kokuphinda uqalise, Gcina uMdaniso wokugqibela iphantse inganyamezeleki. Umgca webali- umdanisi webala ye-ballet-emhlophe (uJulia Stiles) ushenxela kwi-hood kwaye ufunda indlela yokudanisa ihippity hop emva kokuwela umntu omnyama afunda naye (Sean Patrick Thomas) - kukuqengqeleka ngamehlo kufanelekile ngokwaneleyo, kodwa eyona ndawo imbi kakhulu kumdlalo bhanyabhanya ngumdaniso kaStiles. Ukuba ubukele ngokupheleleyo ukubambelela kumdlalo bhanyabhanya uzama ukuthengisa kwiiStiles njengeJoL elandelayo, Gcina uMdaniso wokugqibela kukuzonwabisa okusemgangathweni. Umgangatho ufundwa ngabalinganiswa bakaBianca Lawson kunye noKerry Washington abalimazi, nokuba.
38. 'Ukukhawuleza kunye nomsindo: I-Tokyo Drift' (2006)
UVictor Luckerson : Umboniso bhanyabhanya omnandi kakhulu ugcwele ngabadlali / abadumileyo abaziwayo - bahlala bebizwa ngokuba 'ngulomfo' - abathi kwangoko babonakale bengendawo ngenxa yokuvela kwabo kwifilimu. I-Tokyo Drift igcwele zizityhilelo ezinjalo. Umlinganiswa ophambili uLucas Black ngulomfo uvela Izibane zangoLwesihlanu ebusuku kunye neLizwe eliMangalisayo leDisney bhanyabhanya Danyaza . I-dude ayibalekayo ekuqaleni kwe-movie ngulo mntwana uvela Ukuphuculwa kweKhaya ( hayi UJonathan Taylor Thomas, naye oneminyaka engama-90 ubudala ukuba abe 'yiloo ndoda'). Umhlobo wesikolo samabanga aphakamileyo oMnyama ngulaa mfana uvela kwi-rap yangaphambi kwe-2000s, ekwabizwa ngokuba yi-Bow Wow. Kwaye umboniso bhanyabhanya uphela nge-cameo yokugqibela-iVin Diesel, laa mfo uvela kwasekuqaleni Ukukhawuleza kunye nomsindo ! Phambi kokuba ibe yi-blockbuster action franchise, I-F & F kuye kwafuneka ukuba azinikele kwi-B-movie schlock. Ukubukela abadlali abakufutshane abadumileyo bexubusha i-nadir ye-franchise ebalulekileyo kunye nentengiso yenye yezinto ezivuyisayo zobomi.
37. 'Omnye wabafana' (1985)
USean Fennessey : Andicingi ukuba ikhona indlela emnandi yokubhala ngale bhanyabhanya kwakhona. Iingcamango zesini ziye zavela ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo kule minyaka ili-10 idlulileyo ukuba isiseko esisisiseko asibonakali ngathi siyakhathala njengoko sisenza ngokucacileyo. Yintoni enciphisa ubunzima nangona: Kuyothusa. Kodwa kwakhona kuyabanjwa. Awungekhe ujonge kude kumdlalo weqonga ophakamileyo owenzekayo xa intombazana ekwishumi elivisayo eyayingonwabanga (edlalwa nguJoyce Hyser oneminyaka engama-28 ubudala, mhlawumbi eyaziwa njengeyona nto yayisakuba liqabane langaphambili likaWarren Beatty noBruce Springsteen) uxelelwa. ngekhe aphumelele kwiphephandaba lasekhaya elikwisikolo samabanga aphakamileyo, ke yena ubonakala njengenkwenkwana etyibilikayo kwisikolo samabanga aphakamileyo esichasayo ukuba enze ubuntatheli obunzulu kwaye abonakalise ukungathandabuzeki kwakhe, ngalo lonke ixesha bezama ukunqanda abaxhasi kwaye ekugqibeleni babeke indoda yamaphupha akhe . Ukuchwetheza nje iyelenqe kundigobele kwi-engile elungileyo. Kwaye okwangoku, le bhanyabhanya iyintambo yekhebula. Leyo ayisiyo ingcaciso. Kodwa yinyaniso.
36. 'Abafana ababi II' (2003)
Gruttadaro: Ngaphambi kwe- Abaguquleli uthotho, Amakhwenkwe amabi II yayingowona mzekelo ubalaseleyo womlawuli uMichael Bay's watshiswa-umhlaba ubuninzi. Intshukumo ingaphezulu - a uleqa uhola wendlela waseMiami Uneemoto KUNYE NEZIKHUNDLA ezihamba ngeebhola ngomlilo (akukho nto ikhankanyiweyo); kukho icebo elipheleleyo elisecaleni elijolise kumzabalazo womlinganiswa kaMartin Lawrence nokungasebenzi kakuhle kwe-erectile, esonjululwa xa ngengozi efaka ukonwaba; UMichael Shannon owayengaziwa kangako udlala ilungu leKKK, ebonakaliswa njengeqela le-hokey yee-rednecks kuneqela elinenzondo. Amakhwenkwe amabi II imbi, kodwa ngendlela ekwenza uhlunguzele intloko ude uncume emva koko emva koko uhleke. U-Blame-cop-duo u-Lawrence no-Will Smith, abazibophelela kwizinto ezimbi kakhulu kunokuba umntu elindele ukuba benze njalo.
35. 'Ihlabathi leSpice' (1997)
Giorgis: Kwiminyaka engamashumi amabini kamva, ngaba ukho umntu okhumbula elona cebo li Ihlabathi leSpice ? Kwinto engaqhelekanga, ifilimu yalandela i-Spice Girls xa bejikeleza eLondon kwibhasi yabo yokhenketho. Endaweni yokulandela umkhwa wokudibana nabalandeli, Ihlabathi leSpice bathathe amantombazana kwizinto ezingaqhelekanga, ezingalindelekanga kubandakanya ukudibana nabaphambukeli kunye nobusuku kwinqaba ebhuqiwe. Akukho namnye kumantombazana angenza into (uxolo, i-boos), kodwa imovie ingakumbi malunga ne-antics yabo eyoyikisayo kunalo naluphi na uhlobo lobungqina. UMel B, uMel C, uEmma noGeri bonke babunandipha ubomi bethu emva phayaa ngo-1997; ukuba ufuna ukuba sithandwa sam ngoku, kusafuneka ufumane le filimu.
34. 'Ibala leMfazwe yoMhlaba' (2000)
Gruttadaro: Ke undixelela ukuba umboniso bhanyabhanya osekwe kwincwadi ebhalwe ngumfo owasungula iScientology, eneenkwenkwezi kuJohn Travolta njengomphambukeli omde nge-9 leenyawo kwi-dreadlocks, hayi eyona bhanyabhanya inkulu ka-2000? Abaninzi bayayijonga 'yeyona movie imbi kakhulu yenziweyo' ? NDITSHAZEKILE!
Ewe ngelo xesha, Idabi loMhlaba baxhamla ngokuba yenye ye 'uninzi olungathandekiyo nolungaqondakaliyo lwe studio-enkulu' ngonaphakade. Amawaka amagama okugxeka abhaliweyo malunga nomdlalo bhanyabhanya onke asemi. Kodwa nanku umzekelo obalaseleyo webhanyabhanya owathi waba Olungileyo ngokuhamba kwexesha. Phantse amashumi amabini eminyaka asuswe ekukhululweni kwayo, kunye neTravolta encitshisiwe ukusuka kwimbalasane kumdlalo bhanyabhanya ukuya 'kuAdele Dazeem'- ukuveza ikhathuni, kuyamangalisa ukuphinda ujonge le projekthi yokuthanda okungalunganga. Ukusilela kobu bukhulu kufuneka kuthakazelelwe. Kunene, ngaba iTravolta evaliweyo?
Kulungile, qiniseka. Ndiza kuyithatha njengo-ewe.
33. 'Ukusinda umdlalo' (1994)
Gruttadaro: Abafana abazizityebi abadlalwa nguRutger Hauer, uGary Busey, F. Murray Abraham, kunye noCharles S. Dutton bazingela indoda engenakhaya edlalwa yi-Ice-T-yinto engaqondakaliyo, engenakuphoswa sisiseko somdlalo bhanyabhanya. Ukusinda umdlalo unamaxesha amaninzi amahle Okubi ukubala: Ice-T's isishwankathelo esimnandi indlela ekuziva ngayo ukuphulukana nosapho; indlela athi, 'Wenze kakuhle… njakazi,' emva kokuba ubuntu bukaBusey busweleke emlilweni; Ewe kunjalo, imizuzu emithathu ye-Busey yokubulala inja ebuntwaneni ngezandla zayo.
Ndicinga ukuba uBusey wayecinga ukuba uza kufumana i-Oscar yokutyumba le nto. Akazange.
32. 'Umsebenzi: Akunakwenzeka II' (2000)
Gruttadaro: UJohn Woo yingqondi elungileyo, kunye neyakhe Umnqophiso: Akunakwenzeka II inokuba yeyona bhanyabhanya igcwele kakhulu yohlobo lwayo lwe-slo-mo, inyathelo le-hyperstylized. Ngaphambi kwesigcawu esinomtsalane apho uTom Cruise u-Ethan Hunt avele khona ukuze athabathe i-henchman, umhlambi wamahobe ajinga ngokungacacanga kwiscreen. Ukuhamba ngesithuthuthu kuphela kubonakala ngathi kwenza malunga neepesenti ezingama-65 zefilimu:
Yongeza kuloo nto ukuba ayihlekisi kangakanani ukuba lingakanani iyelenqe elihamba ngalo Itekhnoloji yokutshintsha ubuso engenangqondo -Kwaye inyani yokuba M: I-2 Yincopho yeenwele zikaCruise- kwaye uneyona nyani inyanisekileyo yesenzo esibi.
Inja yokuzingela idada yeNintendo
31. 'Akukho nto ngaphandle kwengxaki' (1991)
UCharlotte Goddu : Ifilimu kaDan Aykroyd inayo yonke into eqaqambileyo ye-carnivalesque Izixhobo zomoya - isetyenziswe kuphela ngesandla esinzima. UDemi Moore noChevy Chase bazifumana bevalelwe kwidolophu encinci yaseValkenvania, ngaphakathi kwendlu ekhwele izindlu egcwele amabhanti okuhambisa ngokufihlakeleyo kunye neendonga ezihambayo. Umboniso bhanyabhanya kufuneka ngawo onke amalungelo ubengu-100 weepesenti goofy: Kukho i-roller coaster ebulalayo ebizwa ngokuba 'Mnu. Bonestripper 'kunye nomlo wokulwa apho isixhobo esikhethiweyo siyimbiza yegumbi; I-Tupac yenza i-cameo njengelungu le-Digital Underground, iqhekeza ngelixa utatomkhulu otyhafileyo ovalele u-Chase noMoore edlala ilungu lokubulala yedwa. Kodwa u-goofiness uyafefa ngamaxesha angaqhelekanga okungaqhelekanga. Ukuleqa ukutyibilika kwiJimmy Stewart cadence rhoqo emva kwexesha; yena noMoore babelana ngolwango lokuncamisa kuloliwe ohamba ebusuku. Akukho nto ngaphandle kwengxaki ayizichazi njengobubudenge kuphela; ikwabonakala ngathi iyimbali yokwenene yothando, exabisekileyo nje kwaye inyanisekile.
30. 'Indoda yokuDiliza' (1993)
Gruttadaro: 'Ngoku zonke iivenkile zokutyela ziyiTaco Bell.' Esi sisicatshulwa ngokuthe ngqo esivela kumlinganiswa kaSandra Bullock kwi Ukudiliza uMntu . Sukuba nexhala, uyacacisa ukuba kutheni: 'I-Taco Bell ibikukuphela kwendawo yokutyela ukuze kusinde iimfazwe ze-franchise.' Le ncoko yencoko yile Ukudiliza uMntu Ngamafutshane, inqwelo-mafutha kaSylvester Stallone malunga nepolisa eliza kuthi, kwixesha elizayo, likhutshwe kwigumbi lalo le-cryogenic ukuze libambe i-archnemesis yakhe (Wesley Snipes). Umboniso bhanyabhanya wonwabile xa usenza oku 'yile nto ubomi buya kuba yiyo kwixesha elizayo' ngeengcinga: Ngaphaya kweeMfazwe zeFranchise, kwixa elizayo amapolisa abhekisa ekubulaweni 'njengokubulala-ukubulala-ukubulala' - kuba ngubani ofuna ukusebenza kakuhle kwesigama? -Nantsi indlela abalala ngayo ngesondo:
Ungayithandi njani into eyenzakeleyo kuloliwe?
29. 'Ukuleqa' (1994)
Gruttadaro: Nanku umgxeki wemovie UJames Berardinelli uqhubeke Ukuleqa : 'Njengomzekelo wobugcisa be cinema banamhlanje, Ukuleqa kukusilela ngokupheleleyo. Njengophononongo lomlinganiswa, ayinakudlula kwinqanaba lencwadi yamahlaya. Njengomdlalo owonwabisayo oqinileyo, ulahlekile malunga nesiqingatha sebali. Kodwa, njengesiqwenga sokuzonwabisa esingafakwanga, esingathobekanga, iyabetha. Leyo yinto efanelekileyo yokuhlanjululwa kohlobo oluhle lwe-Movie embi. Ukuqhubela phambili inqaku likaBerardinelli, kunye nokukunika amanqaku athile ukuba awubonanga Ukuleqa , Nazi izinto ezimbalwa ezenzekayo:
UCharlie Sheen, umhlekisi weqela labantwana, ukwelam emva kokuba umtya wokuphanga owenziwa ngumhlekisi ukhonkxiwe kuye. (Bafumana into engacacanga!)
UCharlie Sheen, ukuze abaleke amapolisa, uthatha uKristy Swanson wababamba kwaye aqalise ukusukela.
Ababukeli ababini-abadlalwe ngu-Anthony Kiedis kunye neFleya ye-Red Hot Chili Peppers, ewe-bazama ukubamba uSheen, kuphela ukuba imoto yabo iye yaphazamiseka kuqhushumbo lomlilo.
U-Swanson uyavelana noSheen, kwaye bobabini babelana ngesondo NGXESHA LOKUTSHAYA.
Ekupheleni kwefilimu, uSwanson, ngoku othandana noSheen, weba ihelikopta, kwaye bobabini babaleka eMexico kwaye bahlala ngokonwaba emva koko.
28. 'IQhawe lokuGqibela lokuSebenza' (1993)
Fennessey: Ngokungafaniyo nezinto ezininzi ezothusayo, ezothusayo, ezingenangqondo, ezithandabuzekayo kolu luhlu, ndiyazithanda-zilungile Iqhawe lesenzo sokugqibela . Kodwa ndiza kudlala kunye ngenxa yale phakheji. Ngamafutshane, nantsi into efana nale: Le movie inokuba sisixhobo sokufunda kwiicinephiles ezincinci! Ngendlela ebonakalayo, ewe, uJohn McTiernan wayekhe wangomnye wabalingisi abanobuchule bokulandelelana kweefilimu zongxowankulu emva kwexesha. Kwaye inika uSchwarzenegger ekuphakameni kodumo lwakhe ehambisa iintlungu-ngeebhombu ngeaplomb. Kukho imiboniso ekwinqanaba eliphezulu kwiKamva likaTywin Lannister, uCharles Dance omkhulu, kunye noTom Noonan njengo'Ripper '(kunye noTom Noonan, odlala ngokwakhe kwilizwe lokwenyani). Kwaye imovie iyanelisa iyaphanzisa kwaye ichaze kwakhona into onokuyilindela kuArnold. Kodwa kwi-obsessives ye-movie enomdla ikwacofa kwiliso lokwexeshana kunye nokhukuliseko lodonga lwesine, isebenzisa iBergman's Death ITywina leSixhenxe Njengendoda embi encedisayo, kwaye ichonge umxholo 'we-movie trope' kumashumi eminyaka ngaphambi kokuba i-intanethi ichaze izinto ngokulula. Emva kokukhululwa, abagxeki bathi le movie ikrelekrele kakhulu ukuba izilungele. Nditsho kuloo nto, 'Ngaba ubonile IBaywatch ? '
27. 'Okwenzekayo' (2008)
Fennessey: Andikukhathalelanga ukonakalisa ukutyhileka kukaM. Night Shyamalan's hysterical, painly slow, idiot tour of force: Imithi ibulala wonke umntu. Ayisiyiyo nje imithi - indawo enegesi ekhutshwa yimithi. Ngokobuchwephesha isilumkiso esicinga ngokwenzululwazi malunga nokufudumala komhlaba (ndiyacinga?), Eyenzekayo lusebenzisa uhlobo lwengcinga yebali enokuthi iyifumane inja kwincwadi ethi Khetha eyakho iAventure, ethi: woof. Eyona nto iphambili kule bhanyabhanya nguMark Wahlberg kunye noZooey Deschanel ekhupha i-chemistry yeenkwenkwezi ezimbini ezifunxwe emazantsi oLwandle oluFileyo. Badlala ootitshala bezama ukubaleka isibetho sentsholongwane kwaye bafike ezantsi kuqhambuko lwehlabathi. Nokuba ngubani osindayo, siyaphumelela.
26. 'UGigli' (2003)
IBereznak: Iinyibiba Umboniso bhanyabhanya ojikeleze yonke indawo. Kuyacaphukisa kuluntu lwe-LGBT ukugxila kwisiqwenga sayo kwinjongo yomntu othe tye (ekuphumeleleni kwengqondo) ukuguqula isini ibe ngumfazi othe tye. Kuyacaphukisa kubantu abakhubazekileyo ngokuxhaphaza ukuxhaphaza umlinganiswa okhubazeke ngengqondo ngokuhleka okuncinci. Kwaye kuyacaphukisa amahlokondiba kuwo wonke umhlaba, ongasokuze athembe i-dopey duo ka-Larry Gigli (uBen Affleck) noRicki (Jennifer Lopez) ukuba bathimbe ilungu losapho lomtshutshisi. Kodwa i-flop ka-2003 ihlala ixabisekile ngenxa yesizathu esinye esiphambili: Yeyona nto ityhiliweyo ishiyekileyo ka-Bennifer, ubudlelwane obuneminyaka emibini obugula obuqale ekuphakameni kweendaba ezihlebayo kwaye baphela ngobomi obufutshane kwaye ibiza kakhulu ukubandakanyeka. Ezi zimbini zifundwa Iinyibiba Iskripthi esinokuthenjwa - enye apho u-Affleck ekhwaza, 'Ndingumgaqo we-fuckin' opholileyo. … Ndingoyena mntu wokuqala ngqo kwi-pimp mack fucking hustler gangster's gangsta '- kwaye ndavuma ukudlala inkqubela kumdlalo bhanyabhanya kungqina ukuba babenenzondelelo, bematha, bengaboni ngothando. Kanye njengokuba uChristopher Walken kunye no-Al Pacino's cameos ezimfutshane kwifilimu zazingathandeki ngokupheleleyo kwithoni nakwisiqwenga sayo, ngokunjalo no-Affleck kunye no-Lopez's chemistry yeeyure ezimbini. Iinyibiba inike uluntu ithuba lokuba ibambe abantu abadumileyo abashushu ababethandana iiyure ezimbini ezipheleleyo, kwaye ikwenzile oko ngaphandle kokubeka nokuba ngumzamo omncinci wokubonelela ngayo nayiphi na into enezinto. Ngenxa yoko, iya kuhlala iyigugu elingenantsingiselo kwimbali yokuphosa ngokuqhutywa kwetabloid.
25. 'I-Catwoman' (2004)
Gruttadaro: Andinawo amagama okuchaza le, kodwa ndinayo ividiyo:
Ewe. Lowo ngu-Halle Berry - I-ACADEMY AWARD – WINNING ACTRESS HALLE BERRY - ephulula i-catnip ebusweni kuba eyinkazana.
Fennessey: Akukho siqalo sikhulu somdlalo bhanyabhanya ngaphandle kwegalari yeqonga evulekileyo emhlabeni. AmaSamamura asixhenxe . Iqela lasendle . Ulwandle lwesiBhozo . Ngomoya lelona qondo liziqondayo ngokwalo kuzo zonke iigalari ezineyona ndawo ilula yokunyusa kwimbali yeemovie zangoku: Intliziyo elungileyo, ukugwetywa ngokungalunganga uNicolas Cage kufuneka alwe nenqwelomoya egcwele oonobangela. Ngomoya uye waba nomjikelo wobomi obonwabisayo oshiye kulindelwe ukuba ubhiyozelwe ukuhlekwa ukuze ugculelwe. Okona kungcono, kuxubana ngokwazi ngengqondo ye-sub-Seagal dialogue, ukuzibophelela ngamehlo avela kuJohn 'Cyrus the Virus' Malkovich, kunye nomphathi wendlela yeenkampu kaSimon West yokubeka iziqwenga. Beka ibhokisi kwakhona kwibhokisi. Kwaye khumbula oku: Unyaka nje ususwe kwi-Oscar yakhe yokuphumelela Ukushiya eLas Vegas , Cage obekade Ngomoya kwaye Ubuso ngaphandle , eyavulwa KWINYANGA EFANAYO ngo1997. Oku kufana noPablo Prigioni ofumana amanqaku angama-50 kwimidlalo yeNBA Finals elandelelanayo.
23. 'Igumbi' (2003)
Zoladz: Kukho iifilimu ezimbi, kukho iifilimu ezimbi kakhulu, kwaye ke kukho Igumbi , Umboniso bhanyabhanya onobukroti kukoyikeka kwakhe okuye kwaba-phakathi kobusuku bhanyabhanya wesekethe ubuncinci- yeyona bhanyabhanya ithandwayo kule nkulungwane. Enye into, ivelise enye yeefilosofi zemibuzo yefilosofi eshushu kakhulu kwixesha lethu: Ngaba uTommy Wiseau udlala nathi? I-melodrama yohlahlo-lwabiwo mali oluphantsi ibonakala yenziwe ngokunyaniseka okupheleleyo nangokungabikho kokuqonda malunga nokuba imbi kangakanani -kodwa uWiseau usijikele sonke esi sihelegu esiya kuhlala sizinzile esiya kuthi sizinze ngakumbi kulo Disemba xa kulindelwe kakhulu nguJames Franco IGcisa leNtlekele uyakhululwa. Sele ikhona ibhaza yexesha lokuwonga ngefilimu kaFranco (apho adlala khona iWiseau), kunye nokubanokwenzeka okungathandekiyo ukuba imovie malunga Igumbi unokutyunjelwa u-Oscar ngandlela thile enze ukuba umjikelo weWebhusayithi oMbi oGqibeleleyo ugqibe, ubonise ukuba utyibiliko lokwahlula phakathi kwe-cinema phakathi kobutyebi kunye nenkunkuma.
22. 'UTroll 2' (1990)
Gruttadaro: Troll 2 mhlawumbi ngumboniso bhanyabhanya ongumzekelo obalaseleyo wolu hlobo lokukwazi ukuguqula ukulandelwa kwehlelo. Troll 2 yeyona movie imbi kakhulu yakha yenziwa- kuvakala ngathi kukuqhubeka kwimovie yango-1986 ebizwa ngokuba Ukurola , ukanti ayidibananga naleya filimu nangayiphi na indlela; ayisiyiyo kwaphela le ndlela-kodwa intshukumo evuthayo yavela ukuxabisa Troll 2 ’Bububi. Kudala emva kokuba umboniso bhanyabhanya bekufanele ukuba uye wabhenela ebumnyameni, ukuvavanywa bekubanjelwe kwizixeko ezinjengeLos Angeles naseNew York, kunye nabathandi bemidlalo bhanyabhanya yasekampus epakishelwe ukuzonwabisa kwi-schlock. Ngo-2009, uMichael Stephenson, inkwenkwezi yomntwana Troll 2 , Waqhubeka wenza uxwebhu malunga nobomi besibini bhanyabhanya njengeklasikhi yeklasikhi ebizwa ngokuba Eyona Movie imbi kakhulu , Efumene uphononongo oluqinisekileyo. Ilungelo elo libali elinesiphelo esimnandi, esikwangqina ukuba lingakanani ixabiso elinokuba nalo kwiMovie elungileyo engalunganga.
21. 'iNdlu yeNdlela' (1989)
Gruttadaro: Abantu abakwi-80s babenentembelo engenangqondo kwaye uPatrick Swayze wayenejusi eninzi kangangokuba bathi, 'Kulungile, masenze njengeMelika lilizwe apho iiklabhu zebhulabhu zihlonitshwa kwaye zaziwa njengosaziwayo, kwaye nalapho iidolophu ezincinci zingenawo kwaphela amasebe amapolisa. kwaye ugobe kwiminqweno yakhe nabani na osisityebi. ' Yiyo leyo Indlu yendlela . USwayze udlala uDalton, ingcali yobugcisa bemfazwe kanjalo unesidanga sefilosofi esivela kwi-NYU (engakholelekiyo). UDalton 'ngopholileyo' ohamba ngenkani ohamba edolophini esiya edolophini ecoca indawo zokuntywila, kwaye umceli mngeni wakhe wakutshanje yiJasper, eMissouri, idolophu egrogriswa ngusomashishini oqhuba ngokwenyani ilori ye-monster kwindawo yokupaka iimoto. Ndidinga ukubhala ngakumbi? Ndingathanda-, ngamagama ayi-10 000 ngaphezulu. Kodwa ndicinga ukuba ufumana umfanekiso wokuba kutheni le movie imbi / ilungile.
20. 'Uloyiko' (1996)
Iidobbins: Yitsho amagama athi 'roller coaster scene' kuye nawuphina umntu wasetyhini oneminyaka engama-30 kwaye uyayiqonda indima edlalwe yile vidiyo ekuvuseleleni isondo kwisizukulwana. Yimizuzu emibini ebabazekayo: ukuqaqanjelwa, ukujonga ixesha lokuPhila phakathi kukaMark Wahlberg kunye noReese Witherspoon, isandi sangeCawa 'samahashe asendle,' iLeese's li'l '90s kilt, kunye nenxalenye apho i-roller coaster's-swoop Isetyenziswa njengesafobe esibonwayo esingenantsingiselo se-orgasm. Ndineentloni kakhulu, kodwa kubalulekile - yile nto olu luhlu lungayo, akunjalo?
19. 'Womntu ofayo uKombat' (1995)
URob Harvilla : Ngaba kufuneka siqale ngomculo, okanye sigqibe ngomculo, okanye sithethe ngomculo kuphela? Inyani: Le goofball cinematic yokucinga kwakhona kwe-mega-ethandwayo kunye gory engenangqondo Umdlalo weArcade unesandi sesithathu esona silungileyo kwii-90s, ngasemva Ipulp engeyonyani kwaye Unomyayi . Esi sizathu. Ukuba awukaze uzilolongele gonzo techno earworm (ngoncedo lwe-Immortals, ihlumelo labasebenzi be-bag-uchafu bag Lords of Acid), ungade ubange ukuba ulungile ngokwenyani? Ngokubhekisele kwifilimu uqobo, yiyo Ingxaki enkulu eTshayina encinci ukuba izithathele ingqalelo enkulu, umxube ongathandekiyo we izigcawu zokulwa ezihlekisayo kunye nokwenza kakubi kakhulu. ULinden Ashby mubi njengenkwenkwezi yebhanyabhanya eqhayisayo uJohnny Cage. UBridgette Wilson (aka Nksk. Pete Sampras, kunye nothando olukhokelayo ku UBilly Madison kubi njengephoyisa uSonya Blade, kwindima ebimiselwe (!?!?) UCameron Diaz . Nantsi ke i-GIF ebonisa ukuba kwenzeka ntoni xa ubuza uChristopher Lambert ukuba kwakunjani ukudlala uRaiden, uthixo weendudumo kunye nencoko yamaplanga:
Le yeyona nto iphambili kwimidlalo yevidiyo eyenziweyo, ekunika umbono wokuba imbi kangakanani imeko yomdlalo weqonga kumdlalo weqonga.
18. 'UMandla oMandla oMandla oMbane waseMorphin: Imovie' (1993)
Luckerson: Andiqinisekanga ukuba ikhona ifilimu elungileyo ebinesihloko esiphela ngo 'Umboniso bhanyabhanya,' kodwa le yamkela injongo yayo yongxowankulu ngokuzimisela - ukwenza esona siqendu sibi kakhulu Abantu abafuna Amandla nanini-ukuba akukho sizathu sakucaphukela okanye ukungathandi. Yintoni kanye onokuyikhangela kwifilimu ebizwa Amandla aMandla aMandla eMorphin: Imovie ngaphandle kwe-cringey liners enye (' Yiba nohambo oluhle, ndikubone ukuwa okulandelayo Ihlala isisithuko sam ngexesha lokulwa ezitalatweni), isikhohlakali esisesikweni eIvan Ooze, ubuninzi beBulk kunye noKhakhayi oluphezulu, isandi esibonisa isibhakabhaka Ipelepele ebomvu ebomvu , kunye neeNinjas zokunyaniseka? Umntu okuphela kwakhe onelungelo lokuyihlazisa le bhanyabhanya nguBlack Ranger, owafakwa isele ngesele xa bephucula iZords kufutshane nencopho yefilimu.
17. 'Ulwandle oluBlue Blue' (1999)
Luckerson: Lo mboniso bhanyabhanya unokukhutshelwa kwindawo yemizuzu emibini ibe yenye yezona zinto zibalaseleyo ekubhubheni kweemovie ngalo lonke ixesha. USamuel L. Jackson, ekuboniseni okuchukumisayo kukaSamuel L. Jackson, wenza intetho ekhuthazayo kumaqabane ambalwa asindileyo kwiziko lophando lwamanzi eligcwele ookrebe abathathu abagqwesileyo bemfuza. Njengokuba amagama akhe avakalayo efikelela kwi-crescendo, u-sh. U-sh.
Ngumzuzu odidayo kumdlalo bhanyabhanya okhathalela ukusuka kwisiqwenga esingathandekiyo esisetiweyo ukuya kwesilandelayo. (Khumbula xa uLL Cool J ebeka ukrebe emlilweni emanzini Ngokutya intaka yakhe?) Zonke izigqibo zokuyila kule bhanyabhanya zivakalelwa ngathi zenziwe ngethemba lokunyusa enye Imihlathi . Endaweni yoko, Ulwandle oluBlue Blue Ijika ukubulala ookrebe kumgca wepunch ongaqondanga. Umgca wenqindi ohlekisayo ngokwenene.
16. 'Ubusi' (2003)
RT: amashumi amabini ananye%
UKate Knibbs : Andizuhlala apha kwi-intanethi ndikuxokise ndikuxelele lonto Sithandwa Ifilimu eyenziwe kakuhle enomdlalo okholelwayo okanye ibali elinentsingiselo. Kodwa ndiza kukuxelela ukuba imovie, malunga noJessica Alba njenge-choreographer ephantsi-kwithamsanqa lakhe ngephupha, yinto eyonwabisayo yokuqala-yomculo. Ayisiyiyo kuphela into ebonakalisa ukumangaliswa kokuza kwenyama kukaMissy Elliott kunye nendima yokuxhasa uLil 'Romeo, ikwabonisa ukubonakala kweGinuwine, Jadakiss, Blaque, Tweet, kunye neSheek Louch. Kwakhona, kuxabisa uMekhi Phifer, ongumdlali olungileyo ofanelwe likhondo elingcono kunelo wayenalo. Yimboniso bhanyabhanya egqibeleleyo yokubeka ngasemva ukuba unetheko lomxholo '00s, kwaye uJessica Alba's abs uhlala eyinkuthazo kuthi sonke.
RT: Iipesenti ezingama-48
Gruttadaro: Lo mboniso bhanyabhanya wenzelwe iqela labantu ababukele ezinye iimovie zentshukumo kwaye bathi, 'AKUKHO UQHELEKILEYO KWANELE, EWE! ' xXx yinto enokwenzeka ukuba Umsebenzi ongenokwenzeka kunye neMidlalo ye-X yabelana ngesondo. IXander Cage (A-plus name) yenza yonke into uEthan Hunt okanye uJason Bourne ebeya kuyenza, ENGAKUMBI nangakumbi nangobukroti obungaphezulu - kuba yile nto besiyidinga sonke ngo-2002. Indawo evulekileyo nguXander (naye uhamba nje ngo 'X') efuna ukuziphindezela kupolitiko owayezama ukuvala umculo we-rap. Thixo, kulungile.
14. 'Akukho kubanjwa kuthintelwe' (1989)
RT: Shumi elinanye%
Gruttadaro: Inzima le, kuba kunjalo kunzima ukuhleka Nantoni na Hulk Hogan-ezinxulumene kwakhona. Kodwa ngumzekelo omhle wezenzo zombini ze-cheesy ze-80s kunye nokubala okungahambi kakuhle kwimveliso ye-movie ukuba udumo oluphezulu kwintsimi enye luya kuguqulela kwisikrini esikhulu ngaphandle komthungo. (Yenzekile ke nakwiLiwa.) Ngaphandle kwamandla akhe okulwa, uHulk Hogan wavela hayi ube ngumdlali wefilimu omnandi, nangona kumnandi ukumbukela tsiba eluphahleni lwe-limousine , okanye wenza ngathi wothukile (okanye ngumsindo? Okanye mhlawumbi kukuzonwabisa? Ngaba umntu uphakamisa njani ukuba ndifunde lo mboniso?) ngaphezulu kokwenza i-henchman poop ibhlukhwe yakhe.
13. 'Amantombazana abonisa' (1995)
Zoladz: Apha uKyle MacLachlan, enye yeenkwenkwezi ze Amantombazana omboniso , uyakhumbula ukubukela Amantombazana omboniso okokuqala:
Yayililizwe liphela ukuziva ngathi uphumelele u-Paul Verhoeven, ophumelele phezulu kwi-Razzie xa yayikhutshwa okokuqala ngo-1995. (Ihleli kuphela kumdlalo bhanyabhanya we-NC-17 ukubona ukukhutshwa ngokubanzi e-US, kwaye kwaqhushumba ibhombu. Kunzima kakhulu kwi-ofisi yebhokisi ukuba sesona sizathu sokuba kungabikho zimbi.) Kodwa kule minyaka idlulileyo, Amantombazana omboniso Ibuye yavavanywa kwakhona ngabagxeki, abenzi beefilimu, kunye nabalandeli abakholelwa ukuba yonke loo nto ibiyinto ehlekisayo ngobuhlakani malunga nephupha laseMelika. Yiyiphi, mhlawumbi kunjalo? Kanjalo? Kodwa ikwayi-smorgasbord yesenzo esifanelekileyo se-porn kunye ne-manic kaElizabeth Berkley, sub-Miley Cyrus gyrations, konke oku kungumothuko wemoto ekhazimlayo kumdlalo bhanyabhanya ongenako ukuwususa emehlweni.
12. 'Uyinto Yonke' (1999)
Nkomo: Makhe ndikuxelele nje izinto ezisibhozo malunga Nguye Konke Oko : (1) Ngenye yeemovie zesikolo esiphakamileyo apho umntu othandwa kakhulu eqala ukujinga nomntu ongathandwa kangako, ongathandeki kangako njengenxalenye yokubheja. (2) Umntu ongathandwa kangako, ongathandeki kangako uthathwa njengomntu ongathandekiyo kwaye onomtsalane kuphela kuba enxiba iiglasi kwaye ewisa izinto xa ehamba. (3) Kukho indawo etyhilwayo apho sibona intombazana engathandekiyo yenziwe yonke into kwaye siqashele ukuba: Ukhulule iiglasi zakhe ngoku umhle kakhulu! (4) Kukho indawo apho umntu anyanzelwa ukuba atye iinwele ze-pubic kwindawo yokutyela. (5) Owona mzuzu unzulu wenzeka ngexesha lomboniso apho umntu odlala umdlalo wobugqwetha njengenxalenye yendlela yokusebenza ye-impromptu. (6) Lil 'Kim kunye no-Usher baneenxalenye ezincinci kuyo. (7) Iphela ngala ngoma ka 'Ndiphuzeni' ngo Sixpence Akukho namnye osisityebi. (8) Igqibelele.
11. 'Ibhitshi' (2000)
UMichael Baumann : Le imbi kakhulu-imbi-bhanyabhanya kuba izinto zayo zilungile. UMlawuli uDanny Boyle? Umenzi wefilimu olungileyo. Ibali nguAlex Garland? Umbhali olungileyo. ULeonardo DiCaprio? Umdlali olungileyo okhokelayo. UTilda Swinton? Umntu olungileyo okhohlakeleyo. Guillaume Canet? Isandi esifanelekileyo sokwenza i-douchecanoe.
Ulwandle khange ikhule kakuhle ngenxa yokuba, ngenxa yokuphuma kuloo mzuzu mhle, udlulayo phakathi kokuphela kweMfazwe ebandayo kunye ne-9/11, ine-aesthetic ethe tyaba, ethembisayo eyenza ukuba ifundwe njengevidiyo yomculo ye-LFO. Kodwa eneneni, ngumbono wabantu bonke: Singaba luluntu olunentlalo-ntle yabantu abahle abangenzi nto ngaphandle kokuloba, baphakame, kwaye badlale iqakamba elunxwemeni, kodwa ilizwe lethu eligqibeleleyo lonakaliswe bubuncinci, inkohliso, ukubawa, kunye Ukuzikhukhumeza kwamadoda angamaMelika acinga ukuba imigaqo ayisebenzi kubo. Ngokunxulumene noko, Ulwandle sisiqwenga sangaphambi kweMfazwe kwiNkqonkqozo, ukuwa koqoqosho ngaphambi kowe-2008, mhlawumbi lelona candelo likhulu lokugxeka inkcubeko.
10. 'Isantya 2: Ulawulo lohambo ngenqanawa' (1997)
UJustin Charity : Ngo-1997 wasinika Ititanic . Ikwasinika nathi Isantya 2: Ulawulo lweenqanawa .
Andifuni ukwenza i-hoodwink apha: Makhe ndicace gca ukuba Isantya 2 Umboniso bhanyabhanya othi umntu afike ekuthandeni ebudaleni obunokubonakala kuphela ngenxa yokuba bechaphazeleke kakhulu kukudityaniswa kwawo kwintambo kwii-2000s zokuqala. Ayisiyiyo imovie elungileyo, kodwa yimovie efanelekileyo. Yimboniso bhanyabhanya ebalisa ibali lakhe elindibetha ukuba ndilonwabele. Rhoqo ndinakho ukulandela umxholo ngokuthembekileyo ngaphandle kokungabinangqondo kwaphela. UWillem Dafoe uqweqwedisa inqanawa eselunxwemeni lwe-Saint Martin, kunye nomntu odiniweyo odlulayo uSandra Bullock amaqela kunye noJango Fett (Temuera Morrison) kunye nomnye wabafana abalahlekileyo (uJason Patric) wokubeka inqanawa ngokukhuselekileyo phambi kukaDafoe - othe kratya kancinci. kwaye ayicacanga ngalo lonke eli shishini - inokubaphazamisa kwitanki leoyile. Konke oku kulungile kwaye kulungile njengesizathu sokuba uDafoe athuthumbise abadlali abathathu beklasikhi abaxhobileyo nabanomtsalane kwisimo esithandekayo seeyure ezimbini, nangona isiwa njengongquzulwano olululo. Yonke imovie iziva njengokungaqondani okukhulu: yintoni eyenze eyokuqala Isantya Kuyachulumancisa, kutheni abantu bethanda isenzo sokubeka into enye, ngexabiso likaSandra Bullock njengesikhokelo. Kodwa kuyahlekisa ukubukela oku kungaqondani kudlala njengokuthunyelwa kwesimumu ngokunyanisekileyo Isantya ukuba uLorne Michaels wayenokuphupha kuqala.
9. 'Phezulu Phezulu' (1987)
Nkomo: Abalinganiswa bebhanyabhanya bakaSylvester Stallone bajongene nezinto ezininzi ezingenakwenzeka. Bajonge umlo wamanqindi ophezulu welinye ilizwe owakhiwe elebhu ( Iliwa IV ), Unikezelo olungapheliyo lwamajoni aseVietnam ( URambo: Igazi lokuqala leCandelo II ), ubunzima ( Cliffhanger ), indawo entolongweni yemizi mveliso ( Tshixela ), kwaye ngakumbi nangakumbi nangaphezulu. Akukho nanye kwezo zinto, nangona kunjalo, eyakha yanzima njengomsebenzi awayejamelene nawo Ngaphaya kwaphezulu , okwakuyi: ukuvuselela ubudlelwane bakhe nonyana wamlahla eselusana ngokuba ngokwenene, ngokwenene, ulungile engalweni. Elo lelona cebo lokwenyani nelililo. Nantsi ke indawo ebhetele: IT FUCKING WORKS. Emva kokuba ehambile iminyaka eli-10, uyabuya, uyaxhoma kunye nonyana wakhe kangangeentsuku ezimbalwa, uphumelele itumente yokubambana ngengalo, kwaye ke bangabahlobo abasenyongweni. Bazibophelela ngokupheleleyo ekulweni iingalo, enyanisweni, kangangokuba akukho namnye kubo obonakala ngathi ukhathalele ukuba umama womntwana usweleke ngelixa bejinga, into engakholelekiyo.
8. 'Indawo yokugqibela' (2000)
UClaire McNear : Ngenye imini uya kufa, kwaye mhlawumbi kuya kwenzeka ngendlela enesithukuthezi. Uya kukhubeka phezu kombhoxo wakho okanye amajoni akho omzimba abuthathaka aya kukhupha okanye uya kuthi tyibilika kumkhenkce uze uthambise intloko kwaye uyakuba njalo. Intoni Indawo yokufikela yokugqibela ucebisa ukuba… kuthekani ukuba ukusweleka kwakho kubaluleke kakhulu, kwaye kunika umdla? Kuthekani ukuba ukufa ngokwako bekuza kuwe, kodwa bekukhathalele kakhulu kangangokuba bekungonelisi ukudibanisa i-aneurysm yegadi-ntlobo okanye ukuqhambuka kwe-E.coli? Indawo yokufikela yokugqibela sisiseko se-rom-com esineenkwenkwezi kubantu abancinci abathandekayo kunye noMvuni oMdaka, ngubani oya kwenza nantoni na (??) anakho ukubonwabisa. Ndibalisile ukubhubha kwabalinganiswa kwabo bathandekayo banenkxalabo malunga nokuphefumla okungaphezulu okunokusetyenziswa ngumntwana oneminyaka emi-5 ukuchaza umhla wokudlala odlala ngokukrakra. 'Wayigcwalisa ngekomityi yekofu ngevodka ... kodwa kwakubanda yade yaqhekeza ikomityi… yaze yashiya umzila wevodka… yaza ikhompyutha yagqabhuka… ngequbuliso wayephantsi wavula itawuli kodwa imela kuyo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ' Indawo yokufikela yokugqibela kuko konke oya kuyidinga.
McNear: Ungathini ukuba iBrazil… kodwa imbi? Ungathini ukuba iinyoka… kodwa zinkulu? Ungathini ukuba u-J.Lo… kodwa ngo-1997? UJon Voight wenza ukusebenza ngalo lonke ixesha, uDanny Trejo uyabonakala, Ice Cube iyayenza into yakhe. Abahlali bangendawo kwaye iinyoka zityumza inyoka. Iziphumo ezizodwa ziye zaguga njenge ... kakuhle, hayi iwayini elungileyo, kodwa njenge 'HASG' imiyalezo kwincwadi yakho yonyaka webanga lesithandathu. Zibe mnandi kangakanani, izinto bezisoloko zilula kangaka, jonga indlela abazame ngayo, njlnjl. Yimiboniso bhanyabhanya yonke yokukhwaza KODWA KUTHENI UNGAYENZA LONTO, UNGAYI EMANZINI, HAYI, YIMA, JONGA I-TV yakho- Ngokwenyani, zeziphi ezona bhanyabhanya zoyikisayo ekufuneka zinqwenele zona.
6. 'Amantshontsho amhlophe' (2004)
Luckerson: Ii-2000s zakuqala zazinomdla wokuhlekisa 'wamapolisa enxiba ngokutsala iiveki / iinyanga ukusombulula amatyala' ekunokwenzeka ukuba angabhabha ngo-2017. Amantshontsho amhlophe yayiyeyona nto iphosakeleyo kwezi bhanyabhanya. Efihliwe njengo-Brittany osisityebi no-Tiffany Wilson (ogqitywe nge-whiteface), ii-arhente ze-FBI uShawn kunye noMarlon Wayans bathatha ukuguquka okucacileyo kwimiba yobuhlanga, iklasi, kunye nelungelo onokuthi ucinezeleke ukuba uhlele le filimu njenge 'Izimvo zentlalo.' Ulibale umyalezo kunye nokuhlala kwamanani omculo, kubandakanya idabi lokophuka phakathi kweWayans Crew kunye nelinye iqela lezentlalontle laseNew York, kwaye uninzi lwazo, iTerry Crews ikhupha 'iiMayile ezingamawaka' ngothando lwabantwana abatsha abaliwaka. Iintombi ezikhohlakele inokuba ngumboniso bhanyabhanya ka-2004 malunga namava amantombazana amhlophe, kodwa Amantshontsho amhlophe , Ukhululwe kwiinyanga nje ezimbini emva koko, ubanzi kwaye usisidenge kwaye ucacile ngokwaneleyo ukwenza ukuba uhleke ngaphandle kwakho.
5. 'UBatman noRobin' (1997)
Iidobbins: 'Jonga, ndiyaxolisa,' umlawuli uJoel Schumacher uxelelwe Usekela kutshanje . Ndifuna ukuxolisa kubo bonke abalandeli ababephoxekile kuba ndicinga ukuba ndinetyala labo. Ilungile. Mhlawumbi kububulumko ukuxolisa kubalandeli be-superhero, kuba luluntu olunempindezelo olunefuthe elingenakulinganiswa kwiibhodi zemiyalezo ye-intanethi. Kodwa asikho namhlanje ukuza kucela uxolo; Silapha ukuzukisa imuvi eyacela uGeorge Clooney ukuba anxibe iingono zerabha kwaye alahle iqhwa lomkhenkce njengomntu okhohlakeleyo. UAlicia Silverstone njengeBatgirl egxekwe kakubi! U-Uma Thurman njengomdiliya onetyhefu owenza nabantu ukuze bafe! Lo mboniso bhanyabhanya kukuzonwabisa okuthabatha iiyure ezimbini zomdlalo weklasi obambeleyo: 'Ngoku khawufane ucinge ukuba ungumlinganiswa wekhathuni! Yiva imibala eqaqambileyo; uzive imigca emincinci eyenzelwe ukuhambisa uburharha. ' Ndikhumbula ngokucacileyo ndithethelela ukugqwesa kwale bhanyabhanya, kuba bendineminyaka eli-12, ndithandana noChris O'Donnell, nesimumu. Kulungile, Joel Schumacher; Abalishumi elinesibhozo amantombazana kunye nabathandi bokuqeqesha abaqeqeshiweyo banomqolo wakho.
4. 'Iinkosi zeNdalo iphela' (1987)
Gruttadaro: Olu hlengahlengiso luka-1987 lwelayini yokudlala kaMatel inayo yonke into efunwayo yiMovie eMbi: IDolph Lundgren, indawo eyoyikekayo Umdlali wexesha elizayo otyunjwe ngu-Oscar Ukungabikho kohlahlo-lwabiwo mali, isixa esimangalisayo se iziphumo ezizodwa ezimbi , kunye nesakhono sokwenza ngokwenyani ukuba ubuze ukuba imovie yakhanyiswa njani iluhlaza. Ukusuka ekukhulelweni ukuya ekuphunyezweni, yonke into ibonakala njengempazamo engenakuphikiswa. Ithathiwe iyonke, nangona kunjalo, yinto ephawulekayo nje ukuyibona.
3. 'ICongo' (1995)
Fennessey: Umtyikityo wesithathu we-Movie embi engalunganga yindoda emhlophe e-bland emele ukuba yinkwenkwezi kodwa icinywe ngokupheleleyo yi-miasma egubungela imo engqonge yona. Cinga ngoThomas Jane Ulwandle oluBlue Blue , okanye uFreddie Prinze Jr. kwi Nguye Konke Oko . Kwindaba ye Khongo -Ukuziqhelanisa nokuziphatha okuhle kukaMichael Crichton okunciphisa impi yamakhaya, amalungelo ezilwanyana, kunye nokukhangela imigodi kaKumkani uSolomon- loo mfo nguDylan Walsh. Ukujikeleza uWalsh, kunye nokuthintela bonke ubukho bakhe, ngumlingisi onetalente ehlekisayo odla isandwich ham yeskripthi esenziwe ngobugcisa ngumdlali weqonga ophumelele u-Oscar uJohn Patrick Shanley. U-Laura Linney uqinisa i-ponytail yakhe njenge-heiress-archaeologist uGqirha Karen Ross, u-Ernie Hudson uhambisa indlela yakhe nge-cigar ezili-10 000 njengo-Captain Munro Kelly, kunye no-Tim Curry owenza owona msebenzi uphambili / owona mbi njengo mhloli-ntsomi ozingela uHerkermer Homolka. Aba bantu bafuna indawo ene-titular yase-Afrika kunye no-Walsh kunye no-Amy, igorila enemfundo eqhubayo emvumela ukuba akwazi ukunxibelelana ngekhompyuter yolwimi oluthethwayo. Ngokukrakra.
Khongo bekukude ukuba 'Ngu-4 emva kwemini, yintoni kwi-HBO?' Umboniso bhanyabhanya okhokelele ekuboneni ngokungenakubalwa kulutsha lwe-latchkey njengam. Kukho iintsalela zayo - ngakumbi uDelroy Lindo's 'Stop. Ukutya. Okwam. Ikhekhe leSesame. ' I-rant-eye yazilungiselela ngokwabo ubuchopho bam. Akukho nto ithi intle njengokungalibalekiyo, incoko engenakuchazeka, imfazwe yegorila, kunye noTim Curry.
2. 'iWild Wild West' (1999)
Gruttadaro: Ngo-1999, uWill Smith wayeyinkwenkwezi enkulu ye-movie eHollywood. Ngelo xesha, uKevin Kline noKenneth Branagh babesele bephumelele u-Oscar. USalma Hayek wayenguSalma Hayek. Yintoni enokwenzeka ukuba isongele imovie eneezo hitters zinzima? Uphendulela, i-tarantula enkulu yomatshini. IWild Wild yaseNtshona sisiporho esibi esineempembelelo ezizodwa zebombastic kwaye ecaleni kokunxibelelana. Ukuyibukela ngoku, inokuba yeyona bhanyabhanya inakho ukubuza umbuzo othi, 'Bebecinga ntoni aba bantu?' Kodwa zonke ezo ziphithiphithi-ezinika ubungqina kolo ukusilela ngokupheleleyo kukwenza ifilimu- zenza ukuba ube namava amnandi okubukela. Ngapha koko, intando kaWill Smith –Sisqo eyayikhapha imuvi, 'iWild Wild West,' ngumqondiso weBANGER.
Luckerson: Olokuqala uhlengahlengiso olukhulu lwaseHollywood kwi-icon yaseJapan yokuthengisa amalungelo aguqukile u-Godzilla ukusuka kwisoyikiso se-Tokyo. Ipaki yeJurassic stunt kabini leyo, ngenene ifuna ukuba neentsana eMadison Square Garden. Ewe, le bhanyabhanya inesakhiwo esincinci esincinci esabanjwa ngokudibeneyo nguMateyu Broderick kunye nababini IiSimps Abadlali abaqhelekileyo (uHank Azaria kunye noHarry Shearer). Ngokuqinisekileyo, iziphumo ezizodwa-ezibandakanya ikakhulu iinyawo zikacikilishe ezikhulu ezityumza iiteksi zaseManhattan - azisekho. Kulungile, uluvo lokuba inyambalala yomntwana u-Godzillas obanjiwe egadini wayeza kuhlasela imvume yokuma i-popcorn ayinakudlula kuvavanyo lwebhayiloji. Andikhathali - Godzilla , Umboniso bhanya-bhanya, wawumkhulu kwaye usisidenge njengomlingisi wayo, kodwa kwisizukulwana sabantwana abatyekele kwizirhubuluzi, bekumnandi kwakhona. UMlawuli uRoland Emmerich utshilo abantwana bayayithanda ngaphezulu kwezinye iifilimu zakhe. Mna, ndedwa, ndisalinde i-trilogy epheleleyo eyayicwangcisiwe kwasekuqaleni.
green bay packers playoff umdlalo
luniz 5 kuyo
nan umdlalo weetrone
upapa omncinci isiqendu sesixhenxe
Isiqendu sesishwankathelo seofisi
Lil waynes albem entsha